Dhageyso Sheekh Abuu Muscab Oo Ka Warbixiyay Weerarkii Fashilmay Ee Degmada Tooratoorow. – Calamada.com
Dhageyso Sheekh Abuu Muscab Oo Ka Warbixiyay Weerarkii Fashilmay Ee Degmada Tooratoorow.
calamada May 10, 2016 2 min read
Afhayeenka ciidanka mujaahidiinta, Shaykh Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa wareysi uu caawa siiyey Idaacada Islaamiga Andalus kaga warbixiyey howlgalkii fashilmay ee xalay gaaladu ay ku soo qaaday degmada Tooratooroow ee Wilaayada Sh/hoose, Isagoona sheegay in cadowgii soo qaaday weerarkaas uu la noqday jab iyo qasaare xoogan.
Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamo Shisheeye oo watay laba diyaaradood oo Hilicopters ah ay soo weerareen degmada Tooratooroow balse ay ka hortageen ciidamada mujaahidiinta oo ku diyaarsanaa afaafka hore ee magaalada, isagoona sheegay cadowga aysan u suuragalin in ay gudaha u soo galaan magaalada.
Wuxuu tilmaamay in dagaal kooban oo socday muddo 30 daqiiqo ah uu halkaas ku dhexmaray ciidamada mujaahidiinta iyo cadowgii weerarka soo qaaday.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in cadowga qasaare uu ka soo gaaray weerarka, islamarkaana dhanka muslimiinta uu jiro oo kaliya dhaawac soo gaaray hooyo da’ ah oo gurigeeda uu ugu yimid mid ka mid ah gantaaladii hoobiyaha ee cadowga uu adeegsanayey intii uu socday dagaalka.
“Ciidamada mujaahidiinta si xeeladeysan bay kaga hortageen weerarkii xaley, weyna ku guuleysteen in ay jabiyaan, Iyadoo weliba diyaarado fara badan ay ku jireen hawada kuwaas oo aan fahamsaneen ujeedka ay lahaayeen laakiin Alle ayaa ku mahadsan oo ciidamada mujaahidiinta waafajiyey in ay ka xeeladeystaan Diyaaradaha cadowga, ayna fashiliyaan weerarka” ayuu yiri Shaykh Cabdi Casiis Abuu Muscab.
Waxa uu sheegay in ciidamada weerarka soo qaaday ay ka soo duulaan tageen garoonka Bali-Doogle halkaas oo aan ka fogeyn degmada Tooratooroow, wuxuuna sheegay in aanan si rasmi ahÂ Â loo aqoonsan waxay ahaayeen balse loo maleynayo ciidamada Mareykanka oo waayadii dambe weerarada noocan ah ka geysanayey deegaanada ay ka taliyaan Mujaahidiinta.
Ugu dambeyntii Shaykh Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa sheegay in ay soo noqnoqdeen fashilka soo gaaraya ciidamada Saliibiyiinta ee weerarada dheelmadka ah ku soo qaadaya xarumaha Mujaahidiinta Balse waqti dhow la arki doono Iyadoo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen diyaaradahooda iyo askarta ay soo dirsadeen oo Maxaabiis ah.
“Ciidamada Mujaahidiinta aad bey u adkeeyeen amaanka magaalooyinka lagu maamulo shareecada Islaamka, Waana taas waxa keenay fashilka isku raac-raacay qorshooyinka cadowga, mardhowna insha’allaah waxaan kala wareegi doonaa diyaaradahooda iyo askar nool nool oo Maxaabiis ah” ayuu yiri Afhayeenka ciidanka Mujaahidiinta Shaykh Cabdi Casiis Abuu Muscab Allaha Xifdiyee.
Dowladaha Mareykanka, Faransiiska iyo ingiriiska ayaa dhowrjeer ku fashilmay weeraro gaadmo ah oo ay ku soo qaadeen Wilaayaatka Islaamiga, iyagoona qaarkood ka cararay meydadka Askartooda iyo agabkooda dagaalka ka dib markii ay iska cabin xoogan kala kulmeen ciidamada mujaahidiinta ee dharaar iyo habeen u soo taagan ilaalinta Muslimiinta iyo ka hortaga shirqoolada cadowga.
Xigasho Telegram-ka Radio Andalus.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 03-08-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 04-08-1437 Hijri.
2 thoughts on “Dhageyso Sheekh Abuu Muscab Oo Ka Warbixiyay Weerarkii Fashilmay Ee Degmada Tooratoorow.”
Allahu Akbar illaahey sw ayaa mahad leh guusha ay mujaahidinta ka gaareen weerarki ay soo maleegtay mareekan gaaladana wey jabeen wlh wax yar unbaa u hartay insha allah
Asc waad mahad santihiin shaqada wanaagsan aad uhaysaan musliinta
gaalada ameerika way jabi doontaa ee haloo sabro
Gaaloo dhan way jabi ibsha allah
mujahideenta guul allah hasiiyo